Inkqubo yoMntu esezantsi nguShishino (A10005) | Izisombululo ze-OMG
Umsebenzi ohamba yedwa ngumntu osebenza yedwa ngaphandle kokujongana ngqo noluntu ngqo. Ke ngoko, ngaphandle komncedisi othe ngqo amaxesha amaninzi bajamelana naluphi na ukulimala olunokuthatha ubomi bomsebenzi oyedwa ukuba akukhange kuncedwe ngokukhawuleza. Ukhuseleko lwabasebenzi bebodwa lubaluleke kakhulu kumacandelo anjengezoLimo, iMigodi, uLwakhiwo, uLwakhiwo, oMbane, ioyile kunye negesi, Iinkonzo Zokhuseleko, ezemali kunye ne-Inshurensi, kunye neeNkonzo zeeNdawo zokuBambisa izindlu. Icandelo ngalinye lineengozi zalo ezinxulumene nabasebenzi abasebenza bodwa. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuqonda umngcipheko ohlukileyo onxulunyaniswa necandelo ngalinye kwaye zeziphi izisombululo ezisetyenziswa licandelo ngalinye ukujongana nale micimbi.
Wonke umzi-mveliso unoxanduva phantsi komthetho ukubonelela ngokhuseleko nokhuselo kubasebenzi abodwa. Apha kweli nqaku, siza kuthetha ngomngcipheko oqhelekileyo abajongana naba basebenzi bodwa kunye nento enokwenziwa ngabaphathi ukunciphisa obu bungozi.
Ukuba sibona kwezolimo kukho iifama ezinkulu kunye nabasebenzi abaninzi, nangona kunjalo, ixesha elininzi abantu basebenza bodwa kwiindawo ezikude. Ngenxa yokuzibandakanya koomatshini abanzima, izilwanyana ezikhulu kunye nokusebenza kwezandla zandisa umngcipheko wokulimala. E-UK ezolimo zibulala amanqanaba okulimala kwamaxesha ngama-18 ngamaxesha aphezulu kunabanye. Ke ngoko, kudala imeko eyoyikisayo kwicandelo lezolimo kwihlabathi liphela ukuthatha amanyathelo anokunceda ukunciphisa iingozi ezinxulumene nabasebenzi abasebenza kwezolimo.
Ulawulo lunokuwanciphisa umngcipheko ngokwenza uqeqesho rhoqo apho bangabaxelela khona ukuba basebenzise oomatshini abanzima, Bamba ngesandla izilwanyana ezikhulu kwaye basebenzise iigloves ngelixa besebenza ngezandla. Kwangokunjalo, kuvavanyo lomngcipheko, banokusebenzisa uhlalutyo lwe-PET olubandakanya umngcipheko onxulunyaniswa nabantu, indawo esingqongileyo, nomsebenzi ngokwenza oku banokuvavanya umngcipheko ophambili womsebenzi ngamnye owenziwe ngumsebenzi oyedwa. Ngaphandle kwalonto kweli xesha lobuchwephesha ukuphatha kungenisa iimoto ezintsha kunye nezixhobo ezinokuthi zinciphise umngcipheko onokubakho onxulumene neendlela zesiqhelo kunye nezixhobo. Okokugqibela, abaphathi banokuchaza iingcambu zokuqhuba ezikhuselekileyo ngabasebenzi bebodwa abanokubanceda kwiindawo ezikude.
Umzi mveliso yenye yezona ndawo zitshisayo emhlabeni. Apho umyinge wokufa wabasebenzi kunye nabasebenzi uphezulu. Iinkcukacha-manani zikarhulumente wase-China zibonisa ukuba i-5000 i-China abavukuzi bafa kwiingozi ngonyaka. Iziganeko zemigodi ziyaqhubeka kwihlabathi jikelele, kubandakanya neengozi ezibangela ukubhubha kwabantu abaninzi ngexesha lentlekele ye-2007 ye-Ulyanovsk mine eRussia. Ezi nkcukacha-manani zilapha ngasentla zibonisa ukuba ukhuseleko kudala luyinkxalabo kwimveliso yezimbiwa. Umntu ngamnye uhlupheka kakhulu kumgangatho ongaphantsi komhlaba (ngaphantsi kwemigodi engaphantsi komgangatho) kunokumbiwa imigodi ngaphezulu. Umsebenzi womntu ujongana neengozi ezininzi ngelixa usebenza njenge-inhalation yothuli yamalahle ebangela ubunzima ngelixa uphefumla, izifo zamaphaphu, ukunqabiseka kwezicubu zemiphunga, ezinokubangela iingxaki eziqhubekayo zokuphefumla. kwaye kudala iingxaki ezininzi zempilo, ezinye iingozi abajongana nazo ezifana nengxolo yoomatshini, ukubhengeza okuchaphazela amandla abo okuva, ukuchaza kakhulu ingxolo egqithileyo kunokubangela i-tinnitus (ukukhala ezindlebeni), ukuphazamiseka kobuthongo, iingxaki zokuxinzezeleka ngamanye amaxesha ukungahlali kakuhle kwendlebe kunye neekhemikhali. igesi, ubushushu bomphezulu, ukuhamba kweoksijini okulinganiselweyo Enye ingozi enkulu kukushukuma komzimba wonke (wbv) kukucothisa kwengozi yomzimba eyenzeka kakhulu kubasebenzi basezimayini abasebenza ngoomatshini abakhulu. Umngcipheko wokuvezwa kakhulu kwemitha yelanga ye-ultraviolet kwimitha yelanga kubalulekile. Ukufumana i-UV kakhulu kunokubangela umhlaza wolusu.
Abaphathi kufuneka bazise isicwangciso sokulawula uthuli kunye nesuphavayiza, okanye ulawulo oluphezulu kufuneka luqinisekise ukuba inkqubo yokulawula uthuli isebenza kakuhle okanye hayi. kufuneka sibaqeqeshe kwindlela yokulawula ukuchanabeka ngakumbi kothuli lwamalahle. Ngawaphi amanyathelo okhuseleko athatyathwa ngexesha lokuvezwa kothuli lwamalahle. Ukukhuselwa kwindawo ekuyo kufuneka kusetyenziswe xa kukhuselwa ulawulo luthuli, lugcinwa okanye lulungiswa. Ukuhlolwa kwezonyango kunye nokuhlolwa kubalulekile. Ukukhusela abasebenzi kwingxolo, amanyathelo olawulo kufuneka athabathe kuqala bahlole imeko yokubonakala kwengxolo emsebenzini ngokuhlola ubungozi. Banokusebenzisa i-dampeners ye-vibration kunye neephaneli zokungena ukulawula ukunyakaza kwenzeka kwimeko yokusebenza. Ukulungiswa rhoqo kunye nokuvavanywa koomatshini abasindayo kukwabalulekile ukunciphisa ingozi yengxolo. abasebenzi kufuneka basebenzise izixhobo zokukhusela ingxolo ezibanceda ukunciphisa iingozi zengxolo. Ukulawulwa kwengozi yomzimba wonke kufuneka kunciphise ishedyuli yokusebenza yabasebenzi, abaphathi kufuneka bayile iishedyuli zomsebenzi eziguquguqukayo zabasebenzi, ukufundiswa ngokuchanekileyo kunye noqeqesho lubaluleke kakhulu kulo msebenzi, ukuhlolwa kwezempilo rhoqo kunye nokujonga esondeleyo kweentlungu zasemva kungayinciphisa le ngozi iyingozi.
Abalawuli kufuneka baqhube uvavanyo lomngcipheko kwiseti yomsebenzi yangaphandle ukunceda ekuphuhliseni amanyathelo afanelekileyo okhuselo kwelanga.
Eyona ndlela isebenzayo yokunciphisa ukubonakaliswa kwe-UV kukusebenzisa indibaniselwano yokhuseleko, asinakuthembela kwindlela elula, kufuneka sisebenzise indibaniselwano yokhuseleko njengokubandakanya ukuhlengahlengisa umsebenzi ukunqanda i-UV ephezulu yemihla, ukubonelela umthunzi wendalo okanye wokufakelwa-ukubonelela ngempahla efanelekileyo yokukhusela, kunye nokusebenzisa ilanga.
Icandelo lemveliso libandakanyeka kutshintsho lwezixhobo eziluhlaza zibe yimpahla. Icandelo lokuvelisa libandakanya amayeza, ukutya, izithuthi, impahla elukiweyo, kunye namanye amashishini anxulumene noko. Njengamanye amacandelo apha kwicandelo lezemveliso kukho amacandelo ahlukeneyo apho afuna abasebenzi abodwa, ukugcinwa nokulungiswa. Xa umqeshwa engabonakali apho umngcipheko onxulumene nabasebenzi uyedwa uyanda. Oomatshini abanzima ngoyena nobangela uphambili onxulumene nokwenzakala kwicandelo lemveliso, kwelinye icala abasebenzi abangakwaziyo ukunxibelelana ukuze bafumane uncedo kwimeko eyingozi.
Abaphathi banokuchonga bonke abasebenzi abakwicandelo lemveliso emva koko benze uvavanyo lomngcipheko olunxulumene nomsebenzi ngamnye. Emva kokwenza uvavanyo lomngcipheko banokuqulunqa umgaqo-nkqubo malunga nokhuseleko lwabasebenzi abodwa. Ngaphandle kwaleyo abasebenzi banokuhamba ne-alam xa besenza umsebenzi okude. Ngokufanayo, banokuhoya ngakumbi ngelixa besebenzisa izixhobo. Imibutho ikwanokubabonelela ngesixhobo sokhuseleko esiqinisekileyo esiya kunciphisa umngcipheko onxulumene nabasebenzi bebodwa.
Umzi mveliso weoyile kunye negesi
Ukuba sibona kwihlabathi liphela ioyile negesi zisehla kakhulu kunanini na ngaphambili kuhlahlo-lwabiwo mali lombutho, nangona kunjalo, asinakukwenza oko kukhuseleko lwabasebenzi bebodwa. Iindawo ezincinci zokukhupha i-oyile kunye negesi kwiindawo ezikude apho kunzima ukugcina unxibelelwano kunye nabasebenzi bebodwa.so kukho indawo engabonakaliyo kunye nengxaki yokuchukumisa kwicandelo leoyile kunye negesi elizala umngcipheko omkhulu. Owona mngcipheko uxhaphakileyo onxulunyaniswa nabasebenzi bodwa kwimizi-mveliso yeoyile negesi kukutyibilika nokuwa, izinto eziwayo, ukusikwa kunye nokutsha kunye nokuchaphazeleka okuqhubekayo kwiigesi. Umngcipheko unokujika ube yingozi apho kufuneka impendulo ngokukhawuleza.
Isisombululo somzi mveliso weoyile negesi kukusebenzisa izixhobo ezitsha zanamhlanje njengenkqubo ye-ihelp-man eyeyona nkqubo incinci yokulandelela ye-GPS ye-3G. Umsebenzi yedwa angacinezela iqhosha xa esiva nayiphi na ingozi okanye umyalezo ozenzekelayo uza kuthunyelwa kunye nendawo xa uwe ngenxa yayo nayiphi na imeko. Amanye amanyathelo anokusebenzisa izixhobo zokhuselo ezinje ngemaski, iiglavu zezandla kunye nezinye izixhobo zokuqinisekisa ukhuseleko lomzimba.
Eli candelo linomngcipheko omkhulu xa kusiziwa kubasebenzi abodwa, kungenxa yokuba aba bantu babhenela ngqo kumbane kwaye umsebenzi oqhelekileyo wabasebenzi abasebenza wedwa kweli candelo ungaphezulu kwe yure enye ngeli xesha nayiphi na into enokwenzeka ingenzeka ekhokelela iziphumo ezibi kakhulu. Kukho nomngcipheko wokufa ukuba into yenzekile kwaye amanyathelo kwangoko akathatyathwa. Ezinye iingozi abanokujongana nazo ukuba ngamanye amaxesha bafumana ukungcangcazela kombane ngelixa besebenza kwiinqaba, kwiindawo eziphakamileyo ngenxa yoku banokuwela emhlabeni kwaye benzakale kakhulu.
Ke ngoko, umbutho unabo abo basebenzi baqeqeshiweyo. Ngelixa kufuneka babe nesicwangciso sokuqulela okungenzeka ukuba yeyiphi na into ekufuneka yenziwe ngumsebenzi oyedwa ukuba ufumana imeko eyingozi. Kananjalo kufuneka basebenze kwisibini. Banokusebenzisa amabhanti okhuseleko afanelekileyo ngelixa besenza umsebenzi kwiziza eziphakamileyo okanye basebenzise inkqubo yokubeka izinto ezonceda abaphathi bafumane isilumkiso esikhawulezayo xa umsebenzi omnye ewela emhlabeni ukusuka kumasayithi aphezulu.
Umzi-mveliso wokwakha uphakathi kwamashishini akhula ngesantya esiphezulu ngenxa yolwando lwabemi kunye nokufudukela kwabantu ezidolophini kwihlabathi liphela. Umzi-mveliso wokwakha uquka ukwakhiwa kwezakhiwo, iindlela, izindlu, izibhedlele, indawo yokusebenza, iivenkile ezinkulu, njl. njl. kodwa kukho iingozi ezizodwa zomsebenzi xa ujonga umphakamo, ingxolo ivela kwizixhobo, umatshini omkhulu uphezulu kuneminye imisebenzi yokwakha. Umngcipheko obalulekileyo kunye nobungozi obukhulu bumntu omnye osebenzela kwiziza, ukuwa kunye nokutsibilika, ukubanjwa phakathi kwezinto, ukuwa ukusuka phezulu kwento, indawo yokusebenza engazinzanga, ukutsiba okanye ukuwela ukusuka kwinqanaba lezitebhisi, ukothuka ngombane, ukulimala entloko, ukuwa koomatshini abakhulu Iikhreyikhi ezinjalo, ngelixa zilayisha kwaye zilayisha umatshini osindayo ukusuka kwenye into iye kwenye, uqeqesho olungalunganga kunye nokugada. Ngamanye amaxesha abasebenzi bebodwa basebenza kwiindawo ezikude kakhulu ngenxa yokungasebenzi kakuhle kunxibelelwano abakwazi ukusebenza neqela labo.
Ukunciphisa oku kulawulwa kwengozi kufuneka kudibanise ukhuseleko njengenxalenye yocwangciso, okokuqala kufuneka babonelele ngoqeqesho olufanelekileyo noqeqesho kumphathi nakwisuphavayiza ke baya kuthi bakhokele abasebenzi babo abasebenza bodwa kwiindawo ezikude ngaphandle koncedo oluvela kulawulo oluphezulu. Kuya kufuneka bangenise inkqubo yokhuseleko lokuwa kunye nokukhuselwa entloko ukuze banciphise ukusweleka kakhulu kunye nokulimala ngexesha lomsebenzi. Ukulawulwa kwabasebenzi ngokukodwa kufuneka abanike uqeqesho lokhuselo kwaye bababonise isibonisi sendlela yokusebenzisa izixhobo kunye noomatshini ngokufanelekileyo. Umphathi okanye umphathi ojongayo kufuneka enze uvavanyo lwendawo ngaphambi kokuqala komsebenzi. Ukuhlolwa ngokuchanekileyo kwezokhuseleko kunye nokuhlola izixhobo kunye nezixhobo rhoqo.
Abasebenzi abasebenza bodwa abasebenza kwiindawo ezikude kufuneka babonelele ngeempawu ezifanelekileyo zokubonisa, ngenxa yoko abaziva ziphi na iingxaki ngelixa besebenza. Unxibelelwano olusebenzayo, abaphathi banokusebenzisa ifowuni engenazingcingo okanye nasiphi na isixhobo se-elektroniki. Banokusebenzisa iirobhothi kwimisebenzi eyahlukeneyo ukunciphisa ulwazelelo lomsebenzi omnye kunye nomngcipheko wokufa.
Icandelo lezezimali neinshurensi:
Ngokungafaniyo namanye amacandelo kwicandelo lezemali kunye neinshurensi, umlinganiselo weqela labasebenzi liphezulu kunakwamanye amashishini. Kwicandelo lebhanki kunye ne-inshurensi ikakhulu, abasebenzi abodwa ngabamele abathengisi kunye namagosa ophuhliso lweshishini. Abo basebenza ngaphandle kwebhanki bazama ukufikelela kubathengi ngeenjongo ezahlukeneyo. Njengomntu ohambela ingqokelela yemali mboleko okanye i-inshurensi, kuba bathwala imali eninzi, bambalwa abantu abanokwenzakalisa abasebenzi abodwa abanokulimaza ilahleko yemali kwaye oko kunokuba sengozini kubasebenzi abodwa. Abasebenzi abahamba bodwa kwicandelo lezemali kunye neinshurensi banokuba nengxaki yokufudumeza, iingxaki zokuphelelwa ngumzimba kwiimozulu eshushu.
Ke, abaphathi banokuya kwizixhobo zokulandela umkhondo ze-GPS eziya kunceda abalawuli ukulandela abasebenzi bodwa. Ukwenza ubomi babo basebenze lula inkampani inokubanika izithuthi ezenzelwe ukuba zibakhusele elangeni kwimozulu eshushu. Ukuhlengahlengisa umsebenzi ukunqanda iingozi ezinxulumene nezempilo, ubonelele ngemveli kunye nezinto ezenziwe ngobuso kunye nokusebenzisa ukukhanya kwelanga.
Umzi mveliso wezindlu:
Uhlobo lweshishini lokuthengisa izindlu nomhlaba apho iiarhente zisebenza zodwa; apho iarhente ihamba nabathengi okanye abathengisi bepropathi, awuyazi into oyifumana emva kocango kwaye kukho amathuba okuba amenzakalise emzimbeni. Ngaphandle kwento yokuba iiarhente ixesha elininzi ziphethe iimali ezinkulu ezinokubangela ingxaki xa umntu efumana inkomba malunga nesixa eso. Kwishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba, umnini msebenzi uhlala yedwa engenalo ulwazi olufanelekileyo malunga nendawo yentengiso, amaxabiso, imfuno kunye nexabiso le-bungalows, iiflethi kunye neendawo zentengiso. Umsebenzi osebenza yedwa kwishishini lokuthengiswa kwezindlu uhlala kutyelelo emasimini ukuze umsebenzi yedwa abe neengozi ezininzi zempilo kwimozulu eshushu.
Ke ngoko, njengamanye amacandelo amanyathelo afana nokulandela umkhondo we-GPS, drive nangona iingcambu zikhuselekile, uhlala ephethe isixhobo sokuzikhusela kunye nawe. Ngaphandle koko musa kwabelana ngolwazi lwakho nabathengi kwaye zama ukudibana nabathengi bakho esidlangalaleni. Ulawulo kufuneka lubonelele ngolwazi oluchanekileyo malunga nentengiso, ixabiso, kunye nexabiso leendawo ezahlukeneyo ukuze abasebenzi bodwa bangathandabuzi ngelixa besenza abathengi kwaye behambisa inkcazo ngezinto eziyinyani kunye namanani. Ulawulo lwabasebenzi olulodwa kufuneka lubonelele ngamanyathelo okhuseleko anjengokusebenzisa ilanga, ukukhusela abasebenzi bebodwa ngokusebenzisa izendalo okanye izithunzi zokwenziwa okanye ukwenza utshintsho kwishedyuli ukuze abasebenzi abodwa bakwazi ukuzikhusela kwimozulu eshushu.
Inkonzo ekusetyenzwa kuyo ngabasebenzi kukususa uthuli lwabantu kwaye isuse inkunkuma ukuze iphinde isebenze kwakhona okanye ilahlwe. Umsebenzi wococeko ukujonga inkqubo yokukhupha kunye nokususa zonke iibhlog, izithambisi ezinqamlezileyo kunye nomonakalo. Umsebenzi yedwa unokujamelana nengozi ezifana nokuvezwa kweegesi eziyingozi; methane, Hydrogen sulfide. Abasebenzi ababodwa abachaphazeleka zizifo ezininzi ngelixa besebenza njenge hepatitis, iingxaki zolusu. Ukucekeceka, ukukhuhla, amanxeba angena ngaphakathi ziingozi eziqhelekileyo abajamelana nazo. Iingozi zabasebenzi ezizodwa ziyanda xa besebenza phantsi komhlaba kwimibhobho eyahlukeneyo, bajongana neengxaki ezinjengokuphefumla, i-hydrogen, ukunqongophala kokukhanya, kunye nezixhobo ezinqongopheleyo. Ubungozi obukhulu kukuba benzakaliswa zizinambuzane ezahlukeneyo ngexesha lomsebenzi. Abahlambi izandla ngokufanelekileyo emva kokwenza umsebenzi wabo ngenxa yokungazi kunye nolwazi
Abaphathi kufuneka bathathe amanyathelo ezonyango kwiziseko eziqhelekileyo zokufumanisa nayiphi na ingxaki yezempilo okanye ingxaki kubasebenzi abodwa. Abasebenzi abasebenza yedwa kufuneka babonelele ngendlela efanelekileyo yokunxiba, iigloves, kunye nezihlangu ukuze bakwazi ukuzisindisa ukusikeka, ukukrala nakumanxeba angena. Banike imaski efanelekileyo kunye neetotshi ukuze benze umsebenzi wabo ngokufanelekileyo. Ulwazi olufanelekileyo kunye nemfundo kufuneka inikwe abasebenzi abodwa. Bafundise indlela yokucoca izandla emva kokwenza imisebenzi ukuze bakwazi ukuzikhusela kwizifo ezahlukeneyo.
Kule nqaku sithetha ngokufutshane ngamacandelo amakhulu achaphazelekayo yimicimbi yabasebenzi abodwa, ke ngoko, sicebisile isisombululo secandelo ngalinye. Ngokusebenzisa ezi zisombululo zilapha ngasentla kwaye zidibanise ezi zisombululo njengenxalenye yocwangciso, abalawuli banokunciphisa ezi ngozi kwaye bonyuse intsebenzo kunye nemveliso yabasebenzi babo bebodwa. Impumelelo yombutho ixhomekeke ngokupheleleyo kwintsebenzo yabasebenzi ngakumbi abasebenzi abodwa. ukuba umbutho uququzelela abasebenzi babo bebodwa banako ukufikelela kwiithagethi zabo nakwiinjongo zabo ezinqwenelekayo.
3828 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-3 Namhlanje